सुर्नया, बैतडी, २९ माघ । सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको मुहार फेरिँदै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म दैनिक उपभोग्य सामान किन्न समेत घण्टौं हिँड्नु पर्ने बाध्यता रहेको यो ठाउँमा सडक विस्तार भएपछि त्यो बाध्यता हटेको छ ।
गाउँमा कुनै मान्छे बिरामी हुँदा उपचारका लागि लैजान समस्या हुने गरेको यस गाउँपालिकामा अब त्यस्तो समस्या छैन । सडक नहुँदा यसअघि सदरमुकाम जान समेत तीन÷चार दिन लाग्ने गरेको भएपनि हाल आएर एक दिनमै सदरमुकाम पुग्न सकिने भएको रौलेश्वर मावि रामकी बरायलका प्रधानाध्यापक गणेश दत्त अवस्थीले बताउनुभयो । “ सडक सञ्जाल विस्तार भएपनि दैनिक उपभोग्य सामान भने सुपथ मूल्यमा किन्न पाएका छैनौंं,” उहाँले भन्नुभयो, “सडक पुगेपछि सहज त भयो तर दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य घटेन ।”
सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै सहज रुपमा गाउँमै सबै किसिमको सामान पाइने गरेको स्थानीयवासी शंकर विष्टको भनाइ छ । यहाँका जनतालाई पहिले घण्टाै हिँडेर पाटन तथा सतबाँझ गएर दैनिक उपभोग्य सामान लिन जानुपथ्र्यो ।
“सडक नहुँदा नून, तेलका लागि समेत घण्टौं हिँडेर बोकेर ल्याउनुपथ्र्यो,” सुर्नया ५ का जयमती मडैले भन्नुभयो – “अब त घरनजिकै गाडीमा सामान आउँछ ।” सुर्नया ८ ढोलेका रमेश बोहराले भने गाउँसम्म सडक नहुँदा घोडा, खच्चरमा खाद्यान्न सामग्री ढुवानी गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “दैनिक उपभोग्य सामान किन्न समेत एक÷दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ ।”
प्रकाशित : सोमबार, माघ २९, २०७४१०:२९
“गोरे” ले ३३ किलो सुन प्रकरण र सनम हत्याकाण्ड बारे गरे यस्ताे खुलासा…
गैंडाको खागसहित पक्राउ परेका एकजना आज सार्वजनिक गरियो !
कालीमाटी तरकारी बजार खुल्यो !
एडिबीद्वारा नेपाललाई १६ अर्ब ९२ करोड विकास सहायता
एमाले-माओबादी एकीकरण भोलि टुंगो लाग्छ – प्रचण्ड
२९ सेकेन्ड अगाडि बिगुल